Ny kômonisma dia rafi-pitondrana sôsialista izay tsy ahitana fanjakana, vola na sokajy ara-tsosialy, ary mampiombona ny fitaovam-pamokarana. Izy io koa dia fomba fieritreretana ara-politika iray ary hevitra aminny fomba fananganana fiaraha-monina ...
Ny sosialisma dia rafitra ara-toekarena sy ara-politika izay ahitana mpiasa mifehy ny fomba famokarana, toy ny milina, na toeram-pambolena, aminny toeranny mpampiasa. Ireo olona izay manohana izany fiaraha-monina miara-miasa izany dia antsoina ho ...
Ny Maritrano na Arsitektiora dia mety midika ny taozavatry ny fanamboarana trano. ary ny fanorenana anatiny dia ny zavakanto sy ny siansa aminny fanatsarana ny atinny tranobe iray mba hahazoana tontolo mahasalama sy mahasalama kokoa ho anny olona ...
Teraka taminny 4 Aogositra 1961 tany Honolulu, any Hawai, filoha faha-44 ani Etazonia i Barack Obama. Zanaka Kenianina mainty sy amerikanina fotsy avy any Kansas, i Barack Obama ny filoha afrô-amerikanina voalohany indrindra any Etazonia. Ary nan ...
Biby mampinono ny kary, iray tarika aminny saka, sady saka dia. Sokajiana ho biby ratsy ny kary eo aminny fiaraha-monina malagasy noho izy biby namanny mpamosavy izay entiny mivoaka alina miaraka aminny vorondolo. Entina hanompana olona, na koa s ...
Ny atôma dia singan-javatra kely indrindra mety mivondrona amina foto-javatra hafa mba hanome izay atao hoe môlekiola. Ny teôria atomista, dia manohana ny hevitra hoe ny zavatra dia vita "voany" tsy afaka zarazaraina, dia fantatra hatry ny Taona ...
Ny zavamananaina na zavamiaina dia zavatra voa-janahary misy eto an-tany izay miaina sy mizatra ny zava-misy. Aminny teny anglisy sy frantsay dia atao hoe organism sy organisme ny zavamananaina. Zavatra miaina ka mitombo, mihetsika, miteraka, ary ...
Ny habakabaka ivelany dia ny toerana ao anelanelanny zavatra anhabakabaka toa ny tany. Izy io dia tsy tena fona fa ahitana voanjavatra vitsivitsy toa ny plasma, hidrozenina, heliôma na taratra ara-kanjanandrianaratra, neotrinô, vovoka ary tanamah ...
Ny soson-drivotranny tany dia fonona entona misy manodidonny tany ahafahanny fiainana misy ary ny rano miranoka nohonny tsindry. Ny rivotra maina dia misy azôty, ôksizenina, argôna, diôksida karbônina ary etona hafa. Ny soson-drivotranny tany dia ...
Ny fahagagana dia zava-miseho tsy araka ny mahazatra na heverina fa tsy fehezin ny lalanan ny natiora, sady asan ny hery tsy hita maso avy amin ny andriamanitra na avy amin Andriamanitra na ny fanahy hafa. Fisehoan-javatra mihoa-draha ny fahagaga ...
Ny karbônina dia zavatra simika manana eva C ary manana lahatra atômika 6. Ny lanja atômikany dia 12.0107. Efa nisy teto an-tany ny karbônina hatry ny fisian ny masoandro: vita avy amin ny niokleôsintezin ny kintana nipoaka ny karbônina talohan n ...
Ny vy dia zavatra simika, manana eva Fe ary manana isa atômika 26. Io no zavatra ferômanetika tena fantatra ary tena hita matetika indrindra aminny fiainana mandavanandro. Ny vy tsotra dia metaly malemy, fa raha asiana lotondoto kely fotsiny izy, ...
Ny fihafananny tany dia fiakaranny hafananny Tany. 0.74°C mafana kokoa nohonny taminny 150 taona lasa ny mari-pana ankehitriny. Ny mahatonga izany dia fitomboanny tahanny diôksida karbônina ao aminny soson-drivotra iainana, araka ny nambaran Svan ...
Ny Masoandro dia kintana eo anivonny rafi-planeta misy ny Tany atao ho Rafi-planetanny Masoandro. Ny savaivony dia misy 1 392 000 km eo ho eo. 99.86%-nny lanjanny Rafi-planetanny masoandro ny lanjanny masoandro, ao ny asteroida, ny komety ary ny ...
Ny kintana sahozanina fotsy dia ny sisa tavelan avo hakitroka avy aminny fivoaranny kintana manana lanja hatraminny lanjamasoandro 8. Ny sahozanina fotsy dia tsy itranganny fiota termôniokleary tahaka ny aminny kintana tsotra intsony. Na dia izan ...
Ny" fiainana ivelan-tany” dia mamaritra endrika fiainana isan-karazany izay misy any ivelan’ny fajiry," Tany”. Mbola tsy voaporofo ny fisiany. Ary, hatramin’izao dia tsy mbola nisy fiainana ivelan-tany hitan’ireo siantifika ireo. Kanefa, misy fam ...
I Roanda na Repoblikan i Roanda dia firenena ao amin ny faritra atsinanan i Afrika, ao amin’ ny ivon’ ny faritry ny Farihy Lehibe. I Kigali no renivohiny. Manana velarana mirefy 26 338 km² i Roanda. Ireto ny manodidina azy mivantana: i Oganda no ...
Ny tantaran i Roanda dia voamariky ny fisian ny fanjakana maro madinidinika izay samy nahitana ny foko Hoto sy Totsy ary Toà, fahatongavanny Eorôpeana, fanjanahan-tany, fahaleovan-tena, ny ady an-trano teo aminny Totsy sy ny Hoto izay niteraka ny ...
Fototra Zavamananaina izany ahitanana mazàna marosela, taminny sela manana vihy nucleus, sy mazàna mandevona hirana mampiasa ny alalan photosynthesis, ny zavamaniry. Plantae anisanizany zavamaniry mitondra vony, sady vafaha, kesika, volonkazo, vo ...
Ny silisiôma dia zavatra simika voasokajy aminny vatovelona. Ny evany dia Si ary ny isa atômikany dia 14. Zavatra anisanny betsaka indrindra ny silisiôma eo aorian ny ôksizenina. Tsy misy amin ny toetrany malalaka izy fa orina: roanôksidana silis ...
Ny alimo dia metaly maro taharo vokatry ny fanatsonihana miaraka ny varahina amin ny metaly hafa. Amin ny heviny tery kokoa dia iantsoana ny fanakambanana ny varahina sy ny firapotsy ny hoe "alimo". Amin ny ankapobeny dia ny 54 %n ny taharon ny a ...
Ny Volana dia volanny Tany. Ny Volana dia satelita natoraly ngeza indrindra eo aminny rafitry ny masoandro. Ny halaviranny tany aminny volana dia misy 384.403 km. Ny teny malagasy hoe volana dia avy aminny fiteny aostronezianina jereo ny teny mal ...
Ny mpanitsy, na mpanitsy zitina dia olikaratra mamadika ny zitina miherina ho zitina mikararana. Ny fiantsoana izany zavatra izany dia fanitsian-jitina. Ny fitaovana ilaina aminizany dia roalahiny ary mpampita tapany vita silisiôma. Ahitana mpani ...
Ny Repoblika dia endrika governemanta iray izay azo dikaina ho "raharaham-bahoaka". Ny famaritana ny repoblika ankehitriny dia governemanta tsy manana mpanjaka ho mpitondra ny firenena. Ny repoblika dia tokony tsy afangaro aminny demokrasia, ny r ...
Apôkrifa no ilazana ireo asa soratra na sary hosodoko, na sarivongana, na say sokitra, sns izay tsy voaporofo ny fahamarinny fifandraisany aminny olona lazaina fa nanoratra azy. Avy aminny teny grika hoe ἀπόκρυφος / apókryphos izay midika hoe "af ...
Léonard de Vinci dia lehilahy italianina iray izay niaina taminny andronny Renaissance. Izy dia mpahay siansa, mpahay matematika, injeniera, mpamoron-javatra, mpahay rafi-batana, sokitra, mpanao mari-trano, bôtanista, mpahay mozika sy ny mpanorat ...
Ny Soeda, na fanjakani Soeda, dia firenena ao Eoropa avaratra ao aminny faritanini Skandinavia. Ny renivohiny dia Stockholm, ny isam-poniny dia 9 223 766 tenenina hoe soedoa. Ny teny tenenina dia ny fiteny soedoa. Ny fiteny finoa sy ny fiteny sam ...
I Sahara dia tany efitra lehibe ao aminny tapany avaratri Afrika izay mivelatra avy any aminny Ranomasimbe Atlantika hatrany aminny Ranomasina Mena, izy no tany efitra lehibe indrindra eto amboninny tany izay manana sakany mirefy 1.500 km sy hala ...
Ny zavakanto, dia hetsiky ny olombelona, na vokatry ny hetsiny, manana tanjona mandamina ny zavatra mikasika ny fitsapa, ny fahatairana ary ny haranitan-tsaina. Ny dikany dia miova arakaraky ny toerana isiana sy arakaraky ny taona, ary tsy misy a ...
I Jolio II dia papa teratany frantsay tamin ny taona 1503 hatramin ny 1513. Teraka tamin ny 14 Desambra 1443 ary maty tamin ny 3 Martsa 1513 tao Roma izy. Ny fitondrany dia isanireo heverina fa tsara laza indrindra nandritra ny andron ny Fifohaza ...
I Joany avy any Patmosy na Jaona avy any Patmo na Joany Mpahita na Jaona Mpahita dia anarana omena ny mpanoratra ny Bokinny Apokalipsy izay milaza ny tenany inefatra aminny anarana hoe "Joany" na "Jaona". Tokony ho tany aminny taona 95 any ho any ...
Ny Alahamadibe na Alahamady be dia ny andro mifanandrify aminny ataonny fanandroana malagasy hoe "vava Alahamady" ao aminny volana Alahamady, izany hoe ny andro voalohany sady ahatsinananny Volana aminny volana Alahamady, izay nosafidinny mpanjak ...
Ny Alahamady no vintana voalohany ao amin ny fanandroana malagasy. Ny Alohotsy no eo alohany ary ny Adaoro no manaraka azy. Ny zoro avaratra-atsinana amin ny no toerana omena azy. Io zoro io dia atao hoe zorofirarazana koa. Amin ny Malagasy dia a ...
Ny sambatra dia famoran-jaza faobe atao any aminny faritra sasan-tsasany ao Madagasikara, indrindra any aminny faritra atsinanana. Fotoana ahafahanny zazalahy hiditra ho isanny lehilahy eo aminny fiarahamonina misy azy izany. Ny foko antambahoaka ...
Ny tromba, araka ny finoan-drazana malagasy, dia fanahy na avelon ny mpanjaka efa maty na ny taranany, na avelon olona nanan-daza teo amin ny mpiara-belona taminy fahizay ka mitoetra miaraka aminy; mbola manohy ny fanapahany ny velona amin ny ala ...
Teraka taminny 4 Martsa 1901 tao Isoraka, Antananarivo i Joseph-Casimir Rabe Antsa, zanaky Rabozivelo, Zanadralambo, avy ao Ambatofotsy - avaratrAntananarivo. Efa taona maro taty aoriana no nanova anarana hoe Jean-Joseph Rabearivelo i Joseph-Casi ...
ANDRIANARAHINJAKA Lucien Xavier Michel teraka ny 30 Desambra 1929 tao Fianarantsoa ary maty ny 11 novambra 1997. Zanak’i RANDRIA Michel Joseph, Ben’ny tanàna Malagasy voalohany tao antampotanànan’i Fianarantsoa. Nanam-bady ary nanan-janaka 6 mian ...
Ny Eja, na Solonomenjanahary Ranivoarisoa Eugénie dia mpanakanto vao misondrotra eo aminny sehatry ny literatiora. Ny Eja dia midika ny haingo sy ny hatsarana Mpanoratra ny raibeny: Itompokolahy Rakoto Paul. Tia manao sary sy maka sary ary manora ...
RABEMANANJARA Jacques dia teraka tao Mangabe, Maroantsetra ny 13 Jiona 1913. Nodimandry ny 2 Aprily 2005 tao Frantsa taminny faha-92 taonany. Nolehibiazina taminny finoana katolika izy, ary nanohy fianarana teny aminny Sekoly ambony mpanomana ho ...
Ny endinakoho na tononakoho dia sakafo gasy aminakoho. Ireo akora ilaina: Vainganakoho no lazaina eto: "feny - elany - nofo-tratrany Marihina fa mitovy ihany ny fikarakarana ny akoho na endasina na atono fa ny tena zava-dehibe dia ny ho masaka ts ...
Mofo atody: mofo Zavatra ilaina: atody 4, siramamy 8 sotro c.à.soupe, tsongo-tsira 2, farine 1/2kg, lévure 1 sachet pour 1/2kg farine, ronono kely. Kapohina miaraka ny atody, siramamy, sira. Rehefa avy eo de arotsakindry ao ny farine efa nafangar ...
Ny ravitoto dia ravina mangahazo nolaingosana ary nototoina. Marihina fa ny laingony no tena tsara sady tsy mangidy. Aminny fotoana fihavianny orana ka mampitsiry ny mangahazo no tena maha-betsaka azy. Matetika dia andrahoina aminny henan-kisoa n ...
Marihina fa trondron-dranomamy no lazaiko eto Ho anolona 4: Makà trondro maina salasalany 4 na mihoatra, dia alomy kely anaty rano fotoana fohy, dia esory sy ario ny taolataonana. Tangosy ny anamalao 200 g farafaharatsiny ary voniny 3 ihany faraf ...
Fomba fahandro ny vary tena mampiavaka ny malagasy tokoa ny vary aminanana. Ny maraina no matetika fihinanana ny vary aminanana. Ny taharo fototra aminny fanaovana ny vary aminanana dia: ny anana. Afaka manao karazana anana maro isankarazany, fa ...
Ny andriana dia sarangan olona farany ambony tao amin ny fanjakana maro teto Madagasikara izay nisongadina indrindra tao amin ny fanjakana merina, izay nipoiran ireo mpanjaka. Tao amin ny fanjakana merina, ny saranga lehibe telo hafa manampy azy ...
Ny Hova dia ireo olona ao amin ny saranga anelanelany tao amin ny Fanjakana merina izay sady tsy mpanompo no tsy andriana. Ilazan ny foko sasany eto Madagasikara ny foko merina tsy anavahana saranga koa ny hoe Hova. Ny Bara sy ny Betsileo ary ny ...